Lasa loharanon-dahatsoratra ho an’ny fifaninanana fandikan-teny manerantany any amin’ny Repoblika Tseky ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2019 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, Español, 简体中文, русский, Italiano, čeština , Français, Esperanto , bahasa Indonesia, українська, English
Strč prst skrz krk. Tsia, tsy kitendritendry tsinahy nataon'ny saka nandeha teo ambonin'ny kitendry io akory fa tena fehezanteny Tseky misy izay midika hoe ‘alefaso any an-tenda ny rantsan-tanana’. Angamba mety tsy ho ilay fehezanteny tena mahazatra izany kanefa matetika ity fiteny ity dia lazaina ho ohatra mifanakaiky amin'ny ‘tsy azo tanterahana mihitsy’ ny hianatra io fiteny slavonika tranainy io, izay teny ampiasain'ny olona miisa 10 tapitrisa ao Eoropa Afovoany.
Vao mainka manampy amin'ny fahasarotana iray hafa amin'ny famehezana ilay fiteny ny fanononana ny ř, izay hita amin'ny fiteny Tseky
Kanefa maro amin'ireo vahiny no tsy mahafantatra ireo fampitandremana ary mazoto mampiasa ny rafitra fitsipi-pitenenana “Kafkaesque” ary miezaka manonona ny feo “ř” izay tsy mety tononina mihitsy. Manao izany ho an'ny fitiavana ny literatiora Tseky ny sasany fa ny ankamaroany kosa dia manao izany mba ahafahany miditra amin'ny tsenan'ny asa Tseky. Ny Repoblika Tseky amin'izao fotoana izao no iray amin'ireo firenena manana ny tahan'ny tsy fanan'asa ambany indrindra any Eorôpa.
Vokatr'izany, nanangana hetsika maromaro tao anatin'ireo taona vitsy lasa izay ny governemanta Tseky mba hampianarana ny fiteny Tseky ho fiteny vahiny. Tao anatin'izany no niara-niasa ny ivontoerana roa mba hanantaterahana fifaninanana fandikan-teny fanao isan-taona ho an'ireo vahiny mpianatra Tseky. Nanomboka hatramin'ny taona 2015, nikarakara fihaonambe iraisam-pirenena izay nahitana fifaninanana mandika teny ny Ivontoerana ho an'ny Fiteny sy Fiomanana amin'ny Fandaharam-pianarana (ÚJOP), izay anisan'ny Oniversite Charles ao Prague (iray amin'ireo oniversite tranainy indrindra any amin'ny kaontinantan'i Eoropa ) sy ny Sampan-draharahan'ny Fandikan-teny ao amin'ny Vaomiera Eoropeana (DGT). Ho an'ny andiany amin'ity taona 2019 ity dia nisafidy ny hampiasa ny Global Voices izy ireo ho loharanon-dahatsoratra ho an'ny fandikan-teny .
Araka ny fanazavan'i Jan Faber, mpiasa ao amin'ny DGT ao Prague, sady mpandika teny Anglisy sy Poloney ihany koa moa izy :
“Mametraka fanamby tena manokana ho an'ny mpikarakara ny fifaninanana. Manana mpandray anjara avy any Shina, Frantsa, Slovenia, Polonina, Rosia ary Italia izahay amin'ity taona ity, ary mila mampiasa ny lahatsoratra mitovy halavana, endrika sy hasarotana. Nanapa-kevitra ny hifidy lahatsoratra navoaka ato amin'ny Global Voices izahay amin'ny ankamaroan'ireo fiteny voalaza etsy ambony ireo ho an'ny andiany amin'ity taona ity. Tena lavorary ny Global Voices satria manome lahatsoratra momba ireo lohahevitra mahaliana sy vaovao izay hita amin'ny dikan-teny maromaro, nadikan'ny mpampiasa ny fiteny, ary mampiasa ny fiteny amin'ny endriny amin'izao fotoana izao sy amin'ny endriny azo takarina”.
Mirary soa ho an'ny mpandray anjara rehetra ny GV ary manantena fa hanatontosa antsafa miaraka amin'ireo mpandresy tsara vintana amin'ny volana Aprily.